Ise Surezọ Surefire iji bulie gị Social Media tọghatara | Martech Zone
Ọ na-aga n'ekwughị na ụzọ kachasị mma iji nweta ma mepụta njikọ mmetụta uche na ndị ahịa nwere ike ịbụ site na mgbasa ozi mmekọrịta. Otu nwere ike ịhụ ọtụtụ ijeri ndị ọrụ dị iche iche na-elekọta mmadụ media nyiwe; ọ ga-abụ nnukwu mbibi ghara iji ohere ọma a mee ihe. Thesebọchị ndị a, ọ bụ maka ịchọ ka ahụ mmadụ, nụ ya, ma nwee mmetụta, ọ bụ ya mere na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla gaa na akaụntụ ha iji kwupụta echiche ya.
Mmadu aghagh ighota ihe omuma ihe omuma ndi a iji weputa usoro nke gha eme ka ndi mmadu gbanwee. O nwere ike bụrụ nkụda mmụọ na mbido ebe ọ na-ewe obere oge ka nsonaazụ a tụrụ anya wee pụta. Nanị ụzọ ị ga-esi mee ya bụ ịmụ banyere etu nyiwe si arụ ọrụ wee weta atụmatụ doro anya tupu imefu ọtụtụ puku dollar na mkpọsa ga-akụrịrị afọ n'ala.
Onlinewa ntanetị juputara na ozi banyere otu esi eme ka mgbasa ozi mgbasa ozi na ntụgharị na mgbanwe mana ịhụ ka ndị a ga-esi buru oke ibu nye ndị mmadụ, anyị belata ya ruo ise. Ka anyị bido ịkụ bọọlụ:
Jiri Visuals na-egwu egwu
E nwere mgbagha n'azụ cliché, "ihe osise na-ese otu puku okwu". Ihe niile na - eme ọsọ ọsọ ụbọchị ugbu a ma ndị mmadụ enweghịzị ndidi ka ha gụchaa ọtụtụ edemede. Ha choro ya ngwa ngwa, otu uzo esi eme nke a bu site na ihe nlere anya. Ihe omuma, ihe ngosi, vidiyo, foto egosiputara iji nweta 94% nwekwuo echiche na mbak jiri ya tụnyere ọdịnaya nwere ihe ngosi efu. Ma ị maara ihe dị mfe maka ọhụụ ụbọchị ndị a? Ikwesighi ịbụ onye pro ma ị nwere ike ịmepụta ha site na enyemaka nke ngwa onyonyo onyonyo. Visuals dịkwa irè na-esi ihe online ọrụ anya, nke bụ ihe dum uche bụ banyere.
Chọpụta Ebumnuche ahụ
Akụkụ nke ịmepụta ọdịnaya nke kwesịrị ịpị bọtịnụ nkekọrịta na-achọpụta onye ndị na-ege ntị. Okwu dị iche iche na-amasị ndị mmadụ sitere na brackets, ọrụ, na ọdịmma dị iche iche, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịmata ndị a. Ndị mmadụ nwere ebe dị nro maka azụmaahịa ha nwere ike ịkwado, otu ụzọ isi mee nke a bụ site n'ịsụ asụsụ ha. Ihe miri emi nghọta nke ndị na-ege ntị bụ, ọ ga-adịrị ya mfe karị ịmepụta ọdịnaya dị elu, nke ruru eru.
Ihe ebube nke Nkwado Ndị Ahịa
Inweta nlebara anya nke ndị ahịa bụ otu ihe, mana ịmara na enwere ndị dị njikere inyere ha aka ma lebara nchegbu ha anya bụ otu n'ime ụzọ dị ọkụ iji nweta ntụgharị. Enwere ọtụtụ ọrụ izi ozi na-enye ndị azụmaahịa ohere ijikọ na ndị na-ege ha ntị n'ịntanetị na ọkwa nke onwe. Ndị mmadụ na-agbanyụ mfe mgbe a na-azaghị ajụjụ ha ọ bụ ya mere ha ji akwado ụlọ ọrụ ndị na-ewepụta oge aza azịza ha. Enwere nhọrọ iji mezie nzaghachi, mmadụ kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-aga usoro a n'ihi na ọ nwekwara ike gbanye onye ahịa ọkachasị mgbe azịza ya anaghị ahaziri ma ọ bụ dị ka ha si na igwe.
Pị bọtịnụ ziri ezi
Ntughari na-ejikọtara na bọtịnụ ịkpọ-oku. N'agbanyeghị otu ọdịnaya si dị ebube, ọ bụrụ na onye ahịa nwere ike ịchọta bọtịnụ oku na-eme, ntụgharị ahụ agaghị eme. Mkpọchi ndị a na-agbachitere azụmahịa na enweghị nsogbu, ọ bụrụ ihe dị mfe dịka ịga weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ zụta ngwaahịa. A na-achọpụta usoro nke chọrọ ọtụtụ usoro naanị otu pịa ọ bụ ya mere mkpọchi ndị a ga-eji dị mma na ndepụta ndepụta kachasị mkpa mgbe ha na-abịa usoro mgbasa ozi mgbasa ozi.
Mara Ihe I Kwuru
Otu ụzọ aghụghọ nke ogo na nsonaazụ ọchụchọ bụ site na iji mkpụrụokwu ziri ezi. Ndị a na-enyere aka ịkwalite ogo ọchụchọ nke weebụsaịtị, ọ bụkwa ihe dị mkpa na mgbasa ozi ọchụchọ akwụ ụgwọ. Ileba anya: hashtags. Ihe ndị a dị mkpa na ịme ka ọdịnaya gosipụta n'ihi na ha na-adọta ndị na-eso ụzọ na ndị na-abụghị ndị na-eso ụzọ, yana ha nwere ike iduga ndị ahịa nwere ike webụsaịtị ụlọ ọrụ wee zụta ngwaahịa.
Stkwalite mgbanwe na-agbanwe agbanwe, nghọta miri emi nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta, ịmata onye ndị na-ege ntị bụ, na ịmara okwu ma ọ bụ ihe oyiyi iji mee. Ndị mmadụ na-adị ngwa ịkekọrịta ọdịnaya ha nwere ike ịkọ na ya, yabụ ọ kachasị mma ịgbakwunye mmadụ ma ọ bụ mmetụta uche na ọdịnaya ahụ. Were ha maka ịnyịnya.
Tags: mgbanweelekọta mmadụ mediaanya